Friday, May 28, 2021 Friday, May 28, 2021 Julien Greenwood
Obi abụọ adịghị ya na ọrịa ahụ gbanwere omume ịzụ ahịa ndị ahịa na atụmanya na-eduga ndị na-ere ahịa ịchọta ụzọ ọhụrụ kachasị mma maka ịntanetị. N'elu ọnụ ọgụgụ na-akwụ ụgwọ n'ịntanetị na 2020 - site na 44% site na 2019 ruo ihe karịrị $ 861 ijeri na US - enweela nnukwu mmụba na nhọrọ mmezu n'ịntanetị, na 80% nke ndị na-azụ ahịa na-atụ anya ịbawanye ojiji nke Buy-Online-Pickup -In-Store (BOPIS) na ntụgharị ihu na 90% ugbu a na-ahọrọ nnyefe ụlọ karịa nleta ụlọ ahịa.
Egwuregwu Social Media: Kedu ihe nyiwe Social Media kachasị na 2020?
Tọzdee, Febụwarị 25, 2021 Tọzdee, Febụwarị 25, 2021 Douglas Karr
Size dị mkpa ma anyị ga-achọ ikweta ya ma ọ bụ. Ọ bụ ezie na abụghị m onye kachasị mmasị na ọtụtụ netwọkụ ndị a, ka m na-ele mmekọrịta mụ na ha - nyiwe kachasị ebe m na-anọkarị. Ewu ewu na-eme ka ndị mmadụ sonyere m, ma mgbe m chọrọ iru netwọkụ mmekọrịta m dị, ọ bụ nyiwe ndị ama ama ebe m nwere ike iru ha. Rịba ama na m kwuru ẹdude. Agaghị m enye onye ahịa ma ọ bụ mmadụ ndụmọdụ ka ọ leghara ya anya
Ihe kariri ihe gbanwere, otua ka ha di otua. Jean-Baptiste Alphonse Karr Otu ezigbo ihe gbasara mgbasa ozi mmekọrịta: ịkwesighi iyi ihe nkpuchi. Can nwere ike ịkọpụta ihe ọ bụla n'oge ọ bụla ma ọ bụ oge niile dịka ọ na-eme n'oge a COVID-19 kụrụ oge. Ọrịa ahụ emeela ka ụfọdụ ebe dị iche iche, mee ka akụkụ ya niile gbaa gburugburu, gbasaa oghere ndị ahụ, ma, n'otu oge ahụ, jikọtara ụfọdụ oghere. Toilelọ mposi dị ka ndị dọkịta, ndị na-ahụ maka ọgwụgwọ ọrịa na ndị ahụ